Hlola i-Dubai, United Arab Emirates - World Tourism Portal
Hlola i-Dubai, United Arab Emirates
Yini ukubona. Izindawo ezihamba phambili ezihamba phambili eDubai, UAE
Iwebhusayithi esemthethweni yezokuvakasha eDubai
Bukela ividiyo ekhuluma ngeDubai
Hlola i-Dubai, enye yezimpawu eziyisikhombisa ezakha i I-United Arab Emirates. Kufana nesifunda sedolobha esizimele futhi siyisidlanzana sanamuhla nesithuthuke kakhulu e-UAE, sikhula ngesivinini esingakholeki emkhakheni wabavakashi nabhweba kakhulu. Muva nje iDubai iwine ibhidi lokusingatha i-EXPO 2020, isizumbulu esibhalisiwe se-Universal esikalini esivunyelwe yi-Bureau of International expositions (BIE), Paris.
IDubai idolobha elihle kunawo wonke kulo I-United Arab Emirates. IDubai yayiqala ukuthandwa eminyakeni yamuva nje kuze kube yilapho kuqubuka isimo somnotho emhlabeni i-2008. I-Dubai empeleni idolobha eliwugwadule futhi elinengqalasizinda ebabazekayo, izinqubomgomo zenkululeko (ngamazinga wesifunda), edume ngezinsizakalo zayo ezinhle kakhulu zabavakashi. I-5 h nje evela e-Europe nase-3 h evela ezingxenyeni eziningi ze-Middle East, i-Near East, kanye ne-India, i-Dubai yenza ikhefu elifushane lokuthenga, ukuhlukanisa, ukushiswa yilanga, ukudla okuhle, imicimbi yezemidlalo, kanye nesono ezimbalwa ubumnandi. Ungumuzi wezinto eziphakeme kakhulu: indawo esheshayo, enkulu, ende kunazo zonke, enkulu kunazo zonke futhi ephakeme kunazo zonke, iDubai ukuphela. Inabantu abaningi kakhulu abafudukayo emhlabeni. Usuku lwamasonto onke lungoLwesihlanu.
IDubai ihlukaniswe izifunda eziningi noma omasipala:
IJumeirah— Isifunda esihlukile esihlalwa izakhamuzi zaseYurophu kwabasePhilippines ukuya kumaPakistanis; i-Little Europe ehlanganisiwe, iKarachi kanye Manila. IJumeirah isithandwa kakhulu ngabaseYurophu ngenxa yokufinyelela kalula ebhishi, Iziza ezihle zibonwa lapha. IJumeirah Ibhishi, iJumeirah Beach Residence's the Walk neJumeirah Mosque yizo eziheha kakhulu.
IDowntown Dubai - Ngenkathi iBur Dubai neDeira ngokwesiko zithathwa njenge- "Downtown", ukuthuthukiswa kweDowntown Dubai kugcwele maphakathi ne- “Dubai New,” phakathi kweDubai Marina ekugcineni kweningizimu kanye nomngcele wedolobha Sharjah enyakatho. Kubandakanya iBurj Khalifa (isakhiwo eside kunazo zonke emhlabeni), iDubai Mall (enkulu kunazo zonke emhlabeni), iDubai Fountain, nezinye izindawo ezinkulu ezisesitezi namahhotela.
IDubai Harbor- Ihlelwe ukuvula u-Okthoba 2020, i-Dubai Harbour izoba yisakhiwo esibonisa ukuthambekela kwamanzi, okunetheku futhi nokunethezekile, okwakha indawo yomgwaqo esezingeni lomhlaba ngesikebhe esikhulu sasemanzini nesithuthuke kakhulu esifundeni. Ishukunyiswa yisiko elide le-Gulf nolwandle, iDubai Harbour isethelwe ukuthuthukisa isikhundla saseDubai njengendawo ehamba phambili emhlabeni jikelele yokuvakasha olwandle, ukuheha izivakashi ezivela kuwo wonke umhlaba. Itholakala ngqo enhliziyweni yaseDubai, endaweni ephakathi kwamanzi amnyama nesibhakabhaka iPalm Jumeirah, i-Dubai Haramu indawo yokulahla itshe kude nezimpawu ezaziwa kakhulu zedolobha, amabhishi amahle nokuheha okudumile emhlabeni.
IDubai Marina— intuthuko eyenzeka emngceleni weJebel Ali (itheku elikhulu kakhulu elenziwe umuntu emhlabeni). Igcwele ama-skyscrapers futhi isingatha i- “Jumeirah Beach Walk” enezindawo eziningi zokudlela, amahhotela imakethe evulekile lapho isimo sezulu sivuma, nemibukiso ejwayelekile. IDubai Marina ingesinye sezindawo eziphakeme kakhulu zaseNtshonalanga eDubai. Kunamahhotela amaningi azungeze iDubai Marina.
Satwa— Enye yeDubai I-India encane futhi UManila omncane, ngenxa yobukhona bePhilipinos namaNdiya, ukukhuphuka kwezindawo zokudlela zasePhilippines nezaseNdiya, izitolo, nezitolo ezinkulu kuyabonakala lapha. Igolide nezindwangu yinto abantu beza lapha, iGold Souk kungenzeka ukuthi uyindawo yakho ephezulu kodwa iSatwa nayo ineezitolo zegolide futhi ayinayo into yokucabanga, ayinabantu kangako.
IKarama - Iningi lesifunda sokuhlala esixubile sezentengiselwano, esinye seDubai I-India encanes futhi UManila omncanes, Ukudla okushibhile nokuthenga okushibhile yizinto eziphambili lapha.
IBur Dubai - Isifunda esingumlando kanye neBur Dubai kuyinto esetshenziselwa leyo ndawo ukusuka eJumeirah kuya emseleni, umfula uhlukanisa iBur Dubai neDeira. Ukuheha izivakashi kusuka abras lapha kuya ezindaweni zokudlela ezintantayo emfuleni odumile kuyatholakala lapha.
Ama-Bluewaters— indawo yokuphila esebenzayo enendawo yokuhlala eyingqayizivele, okuthengisayo, izihambi, kanye nezinketho zokuzijabulisa. Bonke abafikayo baphangwe ngokungakhethi. Ikhaya ku-Ain Dubai, isondo lokuhlola elikhulu kunawo wonke emhlabeni, lipharadesi labathengi, imiqondo eyingqayizivele yezitolo nezindawo zokudlela.
UDeira - isikhungo esidala sezimali saseDubai, namuhla iDeira iyisifunda esiphithizelayo esihlala abantu ngokuhweba esinamapayipi amadala, okufaka owodwa okhombisa izinongo.
I-Arabian Ranchesand Emirates Hills - Lezi yizindawo ezimbili ezihlukile, intela yokuhlala lapha iyabiza ngenxa yenani lomhlaba, njengalo lonke iDubai, lezi ezimbili zenziwe nguMuntu.
IMirdiff / Isifunda sokuhlala esakhiwe ngokuhlala esakhiwe futhi sakhiwe ngqo ngaphansi kwendiza eya eDubai International Airport. Isikhungo Sokukhangisa seMirdif kungenye yezinto ezikhangayo. Lesi ngenye indawo yokuhlala okuhle.
I-International City. Indawo nje elula yokuhlala maphakathi nogwadule, yini ekhethekile ngayo ngomklamo wayo wokwakha, intela yokuhlala lapha ishibhile futhi ngandlela-thile elandelayo Chinatownnjengoba osomabhizinisi abaningi nabesifazane baseChina bahlala lapha.
UJebel Ali. Lapho esehlukaniswe ngobuningi be-Dubai emuva kuma-70's, iJebel Ali manje isiyindawo enkulu yokuhlala futhi yezimboni ehlanganisa izingxenye eziseningizimu zedolobha. Ukuheha okuyisisekelo okuthandwa ngabantu bendawo kanye nezivakashi ngokufanayo ibhendi eyaziwa kalula i-Ibn Battuta Mall, eyenziwe ngomumo emazweni avakashelwe ngumhloli wamazwe odumile. Le mall yakhiwe eduze kwe-Ibn Battuta Gate Hotel okuyindawo enkulu yomgwaqo ingabonakala kude. Sizungeze indawo enezitolo ngamagumbi aseziNgadini, okuyisifunda esihluke ngokuziphatha esinomphakathi onamandla waseNdiya. Idolobhana laseJebel Ali, umphakathi owakhiwe ngonyaka we-35 owakhiwe ngasohlangothini lweJebel Ali (Ali Mountain) labakhi baseYurophu baseJebel Ali Port usathandwa ngokudlulela kwasentshonalanga. Uhlangothi olusogwini lomgwaqo uSheihk Zared eJebel Ali liqukethe amandla amaningi angasebenzi futhi nezitshalo zokuqeda amandla ezonakalisa umbono. Isikhumulo semikhumbi sasiyi-9th ematasa kakhulu emhlabeni nge2011.
IDubai inesimo sezulu esishisayo esishisayo esishisayo esine sezulu esishisayo kakhulu, esinomswakama ehlobo.
Isikhumulo sezindiza esikhulu saseDubai yiDubai International Airport. Ungangena futhi eDubai ngokusebenzisa iSharjah International Airport (SHJ) endaweni eseduze ye Sharjah kanye ne-Abu Dhabi International Airport (AUH) eduzane Abu Dhabi.
Ngemuva kokwethulwa kwa-metro, uhlelo lokuthuthwa komphakathi eDubai mhlawumbe luhamba phambili eMiddle East, kepha luseyidolobha eliqondiswe kakhulu ezimotweni futhi izivakashi eziningi zigcina ukuthatha amatekisi kaningi. Umhleli wohambo lweWojhati angaphakamisa indlela engcono yokuhamba.
Yini ongayithenga eDubai
IShakawarma iyinto etholakala kakhulu yokudla cishe kuyo yonke imigwaqo (futhi ishibhile!) EDubai. Yigama lesi-Arabhu elilingana neBurger. Yinyama ephekiwe ku-skewer bese isikwa imichilo emincane bese ibekwa kwi-kuhbus (Pita) isinkwa ngemifino nokugqoka. AmaShawarma athengiswa zokudlela zamaNdiya angabizi kakhulu.
Enye into edonswayo yendawo yiFala-Fil (Felafel, Falafel) nayo etholakala ngezindleko ezifanayo ne-shawarma.
Iningi lamaketanga okudla okusheshayo aseMelika amise isitolo eDubai, kufaka phakathi i-KFC, Chillis, TGI NgoLwesihlanu, Starbucks neMcDonalds. Ubuhle bokudla eDubai ngukuthi cishe uzothola okudingayo kuyo yonke ukunambitheka.
KwamaNdiya (nabadli bemifino) I-Dubai inokhetho olukhulu lokudla kokudla okwenziwe ngemifino kwaseNdiya. I-Dosa, vada, idlee, i-samosa, i-chapaati / i-roti, ngokulethwa okuningana kwe-sabji (isidlo semifino esiphekiwe) kuyatholakala ngamanani alahleko, ngokuvamile angaphansi kwe-10Dhs ($ 2.5) ngenkambo ngayinye. IBur Dubai (ikakhulukazi indawo yaseMeena Bazaar) neKarama yizindawo eziningi kulezi zindawo zokudlela. Iningi lazo livulekile ukusuka ku-7AM kuze kube yi-10PM noma i-11PM isonto lonke.
Njengoba iDubai ikhule isuka edolobhaneni yaba idolobha eliphithizelayo, kunjalo nangendawo yokuphila ebusuku. Amahhotela ezinkanyezi amaningi e-3 kuya e-5 aneemigoqo nama-nightclub kulabo abanesifiso sokudla kwasebusuku. Ama-DJs asezingeni eliphakeme omhlaba ahlala njalo eDubai emisakazweni yasebusuku kanye nosaziwayo abaningi bomculo we-A-list banezela iDubai ohlwini lwabo lwezinsuku zokuvakasha.
Kodwa-ke, iDubai inemithetho eminingana maqondana notshwala okufanele izivakashi ziqaphele ngaphambi kokuvakashela:
Utshwala butholakala ezindaweni ezinamalayisense kuphela, ezivame ukunamathiselwa emahhotela (iningi lama-nightclub kanye nemigoqo ngaphakathi noma linamathiselwe emahhotela, yize kungenzeka ukuthi lineminyango eyahlukene).
Utshwala abuthengiswa ngamaholide enkolo, noma ngezikhathi zemini e-Ramadan (ngisho nakuma-non-amaSulumane).
Akukho emthethweni ukuphuza utshwala ezindaweni zomphakathi, futhi kunenqubomgomo yokungabekezeleli ukushayela uma udakiwe. Noma ngubani obandakanyeka engxabanweni etholakala notshwala egazini lakhe uvame ukuthola isigwebo senyanga kanye nenhlawulo.
Khumbula ukuphatha uhlobo oluthile lokukhonjwa uma uvakashela ibha uma umncane, ngoba ngeke uvunyelwe kungenjalo. Umthetho uvimbela noma ngubani ongaphansi kwe-21 ukungena.
Iziphathimandla zithatha isenzo esiphazamisayo ngenkathi zidakwa kakhulu, njengokucabanga kwakho okuzoholela esikhathini sasejele noma ukuxoshwa.
IDubai inesabelo sayo sezinkinga. IDubai ilawulwa yincazelo eqinile yemithetho yamaSulumani okumele ihlonishwe yibo bonke abahambi. Musa ukugxeka esidlangalaleni noma ukusabalalisa izinto ezilwa ne-Islam. Ukudla esidlangalaleni ngenyanga engcwele yeRamadan kuyenqatshelwa ekuphumeni kwelanga kuze kushone ilanga futhi izivakashi kufanele zidle ukudla ezindaweni ezihlala ihhotela noma zokuhlala; ezinye izindawo zokudlela zihlala zivulekile ngekhethini emnyango wazo ngalesi sikhathi. Izitolo eziningi zokuthenga zinikeza lensizakalo. Uma ubuza edeskini lolwazi othile uzokuqondisa.
Ezingxoxweni eziphathelene nezepolitiki nezindaba zomhlaba, gwema ukugxeka umndeni obusayo wanoma imuphi we-Emirates noma imindeni yamabhizinisi evelele.
Ngenkathi ubugebengu obuncane bungabikwa noma kukhulunywe ngabo ezindabeni, gxila esikhwameni sakho noma esikhwameni sakho lapho usezindaweni ezinabantu abaningi njengeNaser Square noma iDeira.
AmaConmen ahlala ekhona eDubai, ikakhulukazi ama-scammers.
Ngenxa yokubonga kwempahla entsha yaseDubai, abakhohlisi bezindawo kanye nabathengisi bezindawo bayaphuma, ngakho-ke qaphela uma uzothenga ikhaya elisha.
Ukubonakaliswa komphakathi kothando kuthathelwa phezulu futhi izenzo zobulili zomphakathi zingaholela esikhathini sejele esilandelwa ngokuxoshwa. Uma bonke abavakashi behlala behlonipha futhi behloniphekile ngaso sonke isikhathi futhi baqinisekise ukuthi ababacasuli abantu bendawo nganoma iyiphi indlela, ngethemba lokuthi azikho izinkinga.
I-United Arab Emirates ingahle ibonakale inemithetho ekhululeke kakhudlwana kunabalingani babo abangama-Arabhu, kepha imithetho yona ihlukile kakhulu kunamazwe amaningi aseNtshonalanga, futhi imithetho yabo isebenza ngokuqinile. Ukuqabula okulula endaweni yomphakathi, ukuphuza utshwala endaweni engafanele noma ngisho nokulahlekelwa ukuthukuthela kungakufaka enyangeni noma ngaphezulu ejele. Uyacelwa ukuthi uqaphele futhi uqonde lapho uvakashela futhi uqiniseke ukuthi uyazi yonke imithetho yabo, noma ulindele imiphumela emibi engalimaza kakhulu iholide lakho kanye / noma impilo.
Uma unesikhathi kufanele uvakashele
Umakhelwane uSharjah, ngenkathi eyomile (kungekho notshwala) futhi iningi elingaphansi kwedolobha, unamabhishi ambalwa nomnyuziyamu wenzalo.
Inhlokodolobha yezwe lase-United Arab Emirates, i-Abu Dhabi, iyakufanelekela ukugibela ihora elilodwa nohhafu ukuyibona.
Idolobha Al Ain esiseduzane nemingcele ne-Oman kuyamangaza idolobha elinengadi nezihlahla ezixakile - isici esingajwayelekile kule ngxenye yezwe sicubungula indawo yaso eyihlane.
Vakashela abanokuthula Umm Al Quwain Hleka uma ufuna indawo ethokomele futhi ephumuzayo, engenazimbangi zedolobha nokuphithizela.
Ingaphandle le Fujairah (a hirly Emirate) ube nezindawo eziningi zokuphumula zasolwandle ukuze uphumule ngezimpelasonto.
IDubai inesivumelwano ne-Oman sokuvumela izivakashi ezifanele ukuthola i-visa yase-Omani lapho ifika ngomgwaqo. Izindleko ze-visa yezivakashi ezinosuku lwe-10 yi-OMR 5 (ingakhokhwa ngekhadi).